Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Milamina ve ny fizahan-tany ara-pahasalamana? » Page 2
Talohan'ny taona 2019, nitombo ny tsena satria nanampy tombony fanampiny ireo firenena mpampiantrano ao anatin'izany:
1. Fanatsarana ny fahasalamana
2. Teknolojia farany
3. fanafody manavao
4. Fitaovana maoderina
5. Fanatsarana fandraisana vahiny
6. Fikarakarana manokana
Mampiroborobo ny fitomboan'ny tsena:
1. Tombontsoa fiantohana amin'ny firenena (na orinasa tohanan'ny)
2. Tsy misy fiantohana ara-pahasalamana (na voafetra) eo amin'ny tsena eo an-toerana
3. Fampitomboana ny fitakiana ny fomba tsy voasaron'ny fiantohana (izany hoe ny asa fanendrena ny lahy sy ny vavy, ny fitsaboana ny fahavokarana, ny fanarenana ny nify)
Ny fandinihana natao tamin'ny 2021 notontosain'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana ny aretina dia nahitana olona 0.75 - 1.6 tapitrisa avy any Etazonia mivezivezy any ivelan'ny firenena mba hikarakara fitsaboana mba hisorohana ny vidin'ny fitsaboana be. Ny fandidiana fanoloana hip any Etazonia dia mety mitentina 39,299 $ eo ho eo ary ny fandidiana iray any India, Costa Rica na firenena an-dàlam-pandrosoana hafa dia mitentina eo anelanelan'ny $ 7,000 sy US $ 15,000, ao anatin'izany ny logistika ( www.lebusinessresearchcompany.com ).
Fandefasana vola ho an'ny firenena misy ny toerana itodiana
Ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia miteraka fidiram-bola vahiny ary manampy amin'ny fampandrosoana ankapobeny toekarena. Izy io koa dia manome ny asa sy ny raharaham-barotra ho an'ny mponina ary mampiroborobo ny orinasa mpiray dina toa ny fanafody, fitaovana fitsaboana ary fizahan-tany.
Ny fanohanan'ny governemanta hitazomana ny laza ankapobeny sy ny fitoniana ara-politika an'ny firenena mpampiantrano no mitondra ity tsena ity. Vonona ny hampiasa vola amin'ny orinasa eo an-toerana ny mpanao politika sy ny birao mba hitrandrahana amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany ara-pitsaboana ary nanome alalana ireo tetikasa manampy amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny fotodrafitrasa izy ireo (izany hoe ny rafitra fitateram-bahoaka ary ny fotodrafitrasa famatsian-drano) hisarihana mpitsangatsangana ambony. . Miara-miasa amin'ireo mpandraharaha sy mpizahatany fizahan-tany tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina, manolotra fonosana fizahan-tany ara-pitsaboana feno izay misy famandrihana fiaramanidina sy fitaterana an-tanety, trano fandraisam-bahiny, traikefa ara-kolotsaina ary fiantohana ara-pitsaboana.
Betsaka ny fomba fandidiana kosmetika no raisina ho mifidy ary tsy voarakitra ao anatin'ny drafitry ny fiantohana. Satria ny fiantohana dia tsy manarona ny fomba mifandraika amin'izany, ary ny mpanjifa dia mandoa ny vidiny, ny vidiny ambany any amin'ny firenen-kafa dia miantso ny marary vahiny. Ny vola dia voatahiry amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny toeran-kaleha sy ny fanomanana fandaharam-potoana amin'ny fitsaboana amin'ny taha izay ambany kokoa rehefa miaina hetsika any amin'ny firenena itodiana. Ireo firenena mifantoka amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany ara-pahasalamana dia manolotra trano honenana, safidy fitsaboana sahaza ny hopitaly ary fandaharana ho an'ny hetsika fizahan-tany mifantoka amin'ny fizahan-tany.
Tombontsoa iray hafa ho an'ny firenena fampiantranoana ny fihemorana na ny fanodinana ny fifindra-monin'ny mpitsabo amin'ny firenena mandroso. Ny vondrona Apollo any India dia nanambara fa nahasarika mpitsabo mpitsabo mpitsabo vahiny maherin'ny 123 hiverina izy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana fizahan-tany fizahan-tany ara-pitsaboana bebe kokoa miaraka amin'ny karama fifaninanana sy ny fotoana hipetrahana sy hiasana any amin'ny firenena niaviany raha mbola afaka mampiasa fitsaboana mialoha. (Na izany aza, io dia maneho ny 10 isan-jaton'ny dokotera voaofana indianina miditra amin'ny toeram-pitsaboana any Etazonia isan-taona ary zara raha mahavita dokotera amin'ny filàna 800,000 XNUMX fanampiny any India mandritra ny folo taona ho avy).
Ny fizahan-tany ara-pahasalamana dia namela ihany koa ireo firenena an-dàlam-pandrosoana misy mponina kely kokoa hanohana sy hanohana ara-bola ny fitsaboana sy ny teknolojia mandroso, ary koa ny hitazomana ireo mpitsabo manokana manan-danja amin'ny fangatahana ao an-trano ambany.
Aiza no haleha?
Toerana itodiana malaza amin'ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia: India, Thailand, Costa Rica, Mexico, Malaysia, Singapore, Brezila, Colombia, Torkia, Taiwan, Korea atsimo, Repoblika Tseky, ary Espana. Talohan'ny Covid, India sy Thailand no toerana nalaza indrindra ary nohatsaraina ny satan'i Thailand satria io no iray amin'ireo toerana malaza indrindra any Azia. Ny fitomboan'ny isan'ny hopitaly tsy miankina, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fitsaboana amin'ny ankapobeny ary ny fitsaboana tsy dia lafo loatra dia manampy amin'ny fitomboan'ny mpizahatany mpitsabo ao Thailand.
Thailand no toerana naleha tamin'ny fandidiana kosmetika sy bariatric, anisan'izany ny fampitomboana ny tratra, ny fanesorana ny tombokavatsa laser, ny fametahana lipotra, ny Botox, ny famindrana volo ary ny CoolSculpting. Amin'izao fotoana izao dia manana hopitaly tsy miankina maherin'ny 450 ny firenena ary antenaina hitombo haingana izany. Thailand dia nitodika tany amin'ny firoboroboan'ny firenena toa an'i Shina, Laos, Myanmar, Kambodza ary Vietnam vokatry ny fitomboan'ny fahantrana sy ny fitomboan'ny fitakiana serivisy ho an'ny fahasalamana any amin'ireo firenena ireo.
India no toerana naleha indrindra hanoloana ny fanoloana lohalika sy valahana ary ny bypass gastric raha i Costa Rica kosa no voafantina amin'ny fizotran'ny nify. Alemana dia heverina ho firenena fampiantranoana ny homamiadana ary io aretina io dia nitaky tsena fitomboana lehibe tamin'ny taona 2019 noho ny fitomboan'ny fisehoan-javatra manerantany. Lafo ny serivisy ara-pitsaboana ho an'ny homamiadana ary mitaky fitsaboana maharitra noho izany ny fihenan'ny vidim-piainana amin'ny firenena samihafa dia mampiroborobo ny fitomboan'ny tsena.
I Frantsa koa dia firenena mampiantrano fitsaboana homamiadana satria manana milina radioterôma, mpandeha haingam-pandeha, fidirana haingana any amin'ny dokotera ary ny taha mahomby indrindra any Eropa ( https://www.medic8.com ).
Ny fitsaboana zezika (fizahan-tany fiterahana) dia mampiseho fitomboana haingana amin'ny taha 9.7 isan-jato mandritra ny taona vitsivitsy. Mpivady 20,000 25,000 ka hatramin'ny 4.0 eo ho eo isan-taona no mitady serivisy teknolojia fanabeazana aizana any ivelany. Manodidina ny XNUMX isan-jaton'ny olom-pirenena eropeana no mahazo fitsaboana any amin'ny firenena hafa.
Tiorka malaza ho an'ny serivisy IVF i Torkia ary ny fahasamihafana eo amin'ny Etazonia sy i Torkia dia manan-danja tokoa ka ny vidin'ny fahazoana ny serivisy avy any Torkia dia mihena hatrany na dia misy fandaniana fanampiny aza ho an'ny dia sy fivezivezena. Voamarina fa ny kalitao ny hopitaly tiorka mba ho tsara kokoa noho ireo mari-pamantarana mifanaraka aminy any amin'ny hopitaly amerikana
Nanomboka ny taona 2008 ny fizahan-tany ara-pitsaboana any Taiwan ary io no tanjon'ireo fandidiana tena sarotra toy ny famindrana aty, ny fampidiran-dra, ny fitsaboana homamiadana ary ny fandidiana plastika. Betsaka ny Taiwan no misafidy ireo sampam-pitsaboana marary sy marary miaraka amin'ny ankamaroan'ny marary tonga avy any Shina Tanibe, Indonezia, Filipina ary Vietnam. Ny fidiram-bola avy amin'ny indostrian'ny fizahan-tany ara-pitsaboana any Taiwan dia antenaina hitombo amin'ny tsena tombanana ho akaiky $ 743,740,000 amin'ny 2025.